भोलि नयाँ बर्षको दिन नेपालमा बिहान तपाई उठ्ने बित्तिकै अनौठो दृश्य हेर्न पाउनु हुने छ, सरकारले पनि अनुरोध गर्यो ! तपाईले पनि गर्नुहोला ! – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/भोलि नयाँ बर्षको दिन नेपालमा बिहान तपाई उठ्ने बित्तिकै अनौठो दृश्य हेर्न पाउनु हुने छ, सरकारले पनि अनुरोध गर्यो ! तपाईले पनि गर्नुहोला !
भोलि नयाँ बर्षको दिन नेपालमा बिहान तपाई उठ्ने बित्तिकै अनौठो दृश्य हेर्न पाउनु हुने छ, सरकारले पनि अनुरोध गर्यो ! तपाईले पनि गर्नुहोला !
काठमाडौँ, ३० चैत । विश्व अहिले कोरोना भाइरस महामारीको संकटबाट गुज्रिरहेको यो विकराल अवस्थामा संसारभरिका डाक्टर, नर्स, सुरक्षाकर्मी लगायत यस विरूद्धको मोर्चामा खटिएका छन् । नेपालमा पनि कोरोना संक्रमण फैलन नदिन सरकारले लकडाउन गरेको छ ।
नेपालमा संक्रमण रोकथामको अग्रमोर्चामा स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीहरू लगायत सरकार स्वयम यस विषयमा निकै नै संयम बनिरहेको छ । नेपाली जनतालाई कोरोना संक्रमण हुन नदिन र दैनीक जीवन सहज बनाउन अग्रमोर्चामा खटिएकाहरूको हौसला बढाउन नयाँ वर्ष वैशाख १ गते अर्थात भोली सोमबार बिहान ८ बजे राष्ट्रिय गान गाएर ऐक्यबद्धता जनाउने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।
यसै क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भोलि (सोमबार), नयाँ वर्षको दिन अर्थात बैशाख १ गते बिहान ८ बजे राष्ट्रिय गान बजाउन आमजनतालाई अपिल गरेका छन् ।
सामाजिक संजाल ट्वीटर मार्फत ट्वीट गर्दै प्रधानमन्त्री ओलिले लेखेका छन्, “Play the National Anthem! राष्ट्रिय गान गाऔ, राष्ट्रिय धुन बजाऔ !” ग्लोबल कम्प्याक्ट नेपालको तलको अनुरोध मलाई राम्रो लाग्यो। यस कार्यक्रममा सामेल हुन सबैलाई आग्रह गर्दछु ।”
ग्लोबल कम्प्याक्ट नेपालले ‘अहिले देशमा कोभिड-१९ को संकट रहेकाले अग्रपंक्तिमा रही अहोरात्र खटिने चिकित्सक, नर्ससहितका अत्यावश्यक काममा होमिएकाको सम्मानमा यस्तो गर्न अपिल गरिसकेको छ। यो संस्थाले संकटको घडीमा परिचालितहरुको स्वागतमा राष्ट्र गानको समाप्ति पछि करताल ध्वनिले एकेबद्दता स्वरूप आ-आफ्नो घरको छत तथा बरन्डामा उभिएर तालि बजाउन समेत आग्रह गरेको छ ।
एसिड आक्रमणमा परेकी पवित्रालाई नागार्जुन नगरपालिकाले रोजगारी दिने